Indlu Eyakhiwe Ngamaplanga Esemaphandleni - I-Airbnb
Indlu Eyakhiwe Ngamaplanga Esemaphandleni
Indlu esemaphandleni enefenitshala etofotofo negumbi lokulala elinye elinekhitshi elipheleleyo negumbi lokuhlambela. Inebhedi enkulu elala abantu abayi-2 kunye nebhedi epakishwayo enokulala ibhedi eyi-1 phezulu ize ibe yi-1 kwindawo etsalwayo ngaphantsi. Le ndlu ikwiihektare eziyi-20 zamaplanga. Amaxhama asoloko ebonakala emva kwendlu entle. Kukho igrili everandeni enokusetyenziswa ziindwendwe. Inobushushu obuphakathi kunye nomoya kunye neefeni zesilingi. Ikufutshane neekhilomitha ezintathu ukusuka eKentucky Lake. Ayikho i-WiFi okanye intambo, kodwa sinikezela ngee-dvds kunye ne-VHS tapes.
Ayikho i-wifi ibe inkonzo yefowuni ilinganiselwe gqitha. Nceda ulungele ukuzikhupha ngaphandle kweintanethi.
Le ndlu isecaleni kwendlu enkulu abahlala kuyo ababuki zindwendwe bakho. Ukuba unengxaki vele ungene uze unkqonkqoze kumnyango ongaphambili wendlu.
Kukho imidlalo yebhodi kwindawo yokubeka impahla yezo ntsuku zasehlotyeni okanye ebusuku ebusika. Ungaphumla kwiveranda yelanga ukuba ufuna ukubukela izimuncumuncu okanye umamele iintaka kusasa.
Amalungiselelo okulala anokuhlala abantu abayi-4. Iindwendwe ezi-2 zingabelana ngebhedi enkulu. Undwendwe oluyi-1 lunokulala kwibhedi enkulu emibini kwaye undwendwe olongezelelweyo lunokulala kumatrasi otsalwayo phantsi kwebhedi encinci.
4.89 · Izimvo eziyi-155
Abamelwane abakufutshane kule ndlu esemaphandleni ngamasimi amafama, amahlathi, kunye nezinye iinkomo eziza kukujonga ngobulumko njengoko uhambahamba. Akukho mizila endlwini yethu yokunyuka intaba, kodwa sikwiimayile eziyi-3 ukusuka echibini le-KY kwaye malunga nemizuzu eyi-15 xa sihamba ngemoto ukuya eMhlabeni Phakathi kwendawo yokuzonwabisa yamaLwandle. Apho ungafumana iLcl Nature Station, iLston Bison Prairie, kunye nePlanetarium kunye neendlela ezintle zokunyuka intaba. Ithuba elininzi lokuzingela nokuloba kule ndawo, kodwa kungekhona ngokukhethekileyo kwindlu yethu.
Sifumaneka ngomyalezo, ngefowuni, nange-app yakwa-airbnb. Sihlala kumnyango osondeleyo kwindlu enkulu ngoko ukuba unengxaki zive ukhululekile ukuza kunkqonkqoza kumnyango wangaphambili.